Indawo esembindini yedolophu yaseBarber - I-Airbnb
Indawo esembindini yedolophu yaseBarber
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguO Donoghue
Isanda kulungiswa igumbi lokulala eli-3 kwiziko ledolophu yaseBelmullet. Ukuhamba imizuzu emibini ukusuka elunxwemeni olukufutshane kwaye ecaleni kwazo zonke izinto zalapha ekhaya. Indawo yokubhaka, ivenkile yekofu, ivenkile enkulu, ii-pubs, indawo yokuhlamba impahla, iindawo zokutyela nokunye okuninzi.
Le ndlu inamagumbi okulala amathathu, igumbi lokuhlambela elinye kunye negumbi lokuhlambela ezimbini. Amagumbi amabini okulala anebhedi ephindwe kabini kunye neyodwa kwaye igumbi lesithathu linebhedi ephindwe kabini. Amagumbi okulala enziwe ngokwenani elichaziweyo leendwendwe ezihlalayo.
Ikhitshi linehobhi, ifriji, iketile, itoaster, imicrowave njl.
Indawo yethu ibekwe kumbindi wedolophu yaseBelmullet. Xa uhlala apha uya kuba kufutshane nayo yonke into. Idolophu yethu isanda kulungiswa indawo yokuqubha kukuhambo lwemizuzu emihlanu ukusuka kwigumbi lokuhlala. Ipaki yethu yedolophu enebala lentenetya, ibala lebhola ekhatywayo kunye nepaki yabantwana isemva kwendlu yethu enendlela ekhuselekileyo yetha yokuya epakini.
4.85 · Izimvo eziyi-103
KwiSitrato esiPhambili kufutshane neebhari eziphambili, kanye ecaleni kwebhanki, umatshini we-atm, ikhemisti, ii-newsagents kunye nevenkile yokubhaka.
Umbuki zindwendwe ngu- O Donoghue
We own a family bakery in Belmullet town. We have decided this year to rent out our newly refurbished apartment as a way of getting to know new people visiting beautiful Belmullet. We are here to help with any questions or anything you need during your stay.
We own a family bakery in Belmullet town. We have decided this year to rent out our newly refurbished apartment as a way of getting to know new people visiting beautiful Belmullet.…
Sifumaneka ngalo lonke ixesha kwiindwendwe ukuba siyafuneka nangaliphi na ixesha. Singabanikazi bevenkile yekofu ecaleni kwendlu kunye nevenkile yokubhaka imizuzu emihlanu ukusuka kwigumbi ukuze ilungu labasebenzi bethu lifumaneke ukusuka ngoMvulo ukuya ngoMgqibelo nge-9-4 kwaye sifumaneka ngomnxeba ngawo onke amanye amaxesha.
Sifumaneka ngalo lonke ixesha kwiindwendwe ukuba siyafuneka nangaliphi na ixesha. Singabanikazi bevenkile yekofu ecaleni kwendlu kunye nevenkile yokubhaka imizuzu emihlanu ukusuka…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Belmullet